अमेरिका लगायतका पाश्चात्य मुलुकमा किन २५ तारिख पर्यो दशैँको साईत ? नेपालमा किन २६ तारिख? महत्वका साथै बुझ्नु पर्ने धेरै कुराहरु – अक्टोबर २५, २०२० – Hindu Cultural Center
Home Event Calendar अमेरिका लगायतका पाश्चात्य मुलुकमा किन २५ तारिख पर्यो दशैँको साईत ? नेपालमा किन २६ तारिख? महत्वका साथै बुझ्नु पर्ने धेरै कुराहरु – अक्टोबर २५, २०२०
अमेरिका लगायतका पाश्चात्य मुलुकमा किन २५ तारिख पर्यो दशैँको साईत ? नेपालमा किन २६ तारिख? महत्वका साथै बुझ्नु पर्ने धेरै कुराहरु –
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर यथार्थ र सत्यताको खोजी गर्न चाहनु हुन्छ भने कृपया यो लेख पूरै पढ्नु होला । धन्यवाद ।
वासिंटन डिसी, अमेरिका
अमेरिका तथा क्यानडामा दशैँ कुन दिन मनाउने भन्ने विषयलाई लिएर यो वर्ष पनि समाजिक सन्जाल फेसबुकमा यसलाई निकै बहसको विषय बनाएको देखिन्छ । कसैकसैले यसलाई विवाद र विभाजन हुने भयो नेपाली समाज भनेर तर्क पनि राखेको पाईयो भने दुई खालको भनाई आउँदा कुन दिन मनाउने भन्ने विषयमा दोधार उत्पन्न भई भ्रम सृजना भयो भनेर धेरै जनाको फोन र म्यासेज पनि नआएको होईन । अब यो विषयको निर्णय तपाई आफैले लिन सक्नुहुनेछ, वादविवाद हुनु भनेको समस्या हुनु हो, जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ । अमेरिकाको अति व्यस्त जीवनमा रहेर पनि धर्म तथा सँस्कृतिप्रति चाख देखाउने सम्पूर्ण भक्तजन, ईस्टमित्र, बन्धुबाधवहरु सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै दशैँको शुभकामनासहित २/४ वटा प्रमाणहरुको साथमा यो लेख पस्कन चाहन्छु ।
ज्योतिष मेरो पनि आफ्नो प्रमुख विषय भएकोले कसैलाई पनि भ्रममा नपर्नु हुन अनुरोध गर्दछु । यो कुनै विवादित विषय होईन र कुनै पनि राजनीतिक तथा साम्प्रदायिक विषयसँग पनि जोडिएको छैन । यो एउटा समय र गणितको सत्यतालाई जनसमुदायमा पस्कने अभियान हो । हाम्रो समाजमा दशैँको जति साँस्कृतिक महत्व छ त्यतिकै धार्मिक र शास्त्रीय महत्व पनि रहेको छ । हाम्रा जति पनि चाडपर्व र ब्रतहरु छन् ती सबै तिथिअनुसार मनाईन्छन् ।
वैज्ञानिक आधार तथा धार्मिक र शास्त्रीय मान्यतालाई कुल्चदैँ विभिन्न ठाउँमा रहेका मन्दिर सन्चालकहरु तथा सामाजिक अभियन्ताहरुमार्फत् दशैँको साईतको निर्णयहरु लगायत अन्य चाडपर्व तथा ब्रतहरु मनाउँदा नेपालका लागि बनेका पात्राहरुका आधारमा निर्णय गर्दै सूचनाहरु प्रकाशित गरेको कारण यो समस्याको सृजना भएको हो । कतिपय संघसँस्थाका मालिकहरु नै विद्वान गुरु तथा ज्योतिषीहरुको राय र सल्लाहबिना नै यो दिन मनाउनु पर्छ भनेर हाम्रो पात्रो एप्स (अनलाईन ) लाई आधार मान्दै निर्णय गर्नु हुन्छ तर यो हाम्रो पात्रो एप्स नेपालको लागि बनेका पात्राहरुको आधारमा बनाईएको हो र विदेशको लागि यो पात्रो आधिकारिक हैन र छैन । यदि सजिलोको लागि यसलाई आधार मानेर गर्नु भएको छ भने अबदेखि नगर्न सक्नु हुन्छ । विदेशको लागि Hindu calendar Drik panchanga Apps डाउनलोड गरी चलाउन सक्नु हुनेछ । यसले स्थानीय ठाउँ र समयअनुसार तपाईलाई जानकारी दिन्छ । हुनत: हाम्रो समाजले सत्यको खोजी गर्नु भन्दा पनि जता आगो ठूलो बल्छ त्यतै ताप्न खोज्ने हाम्रो बानीले गर्दा पनि यस्तो स्थिति आएको हो । जता भिड बढी हुन्छ उतै लाग्नु पर्छ भन्ने मानसिकताले हामीलाई गाँजेको छ । ये मैले यसो गरेँ भने अरुले के भन्ला, उसले नराम्रो पो मान्ने हो कि भै गो उसले जे गर्छ मैले पनि त्यसै गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकतामा हामी हुर्केका छौँ । हामीले आफूले आफैलाई कहिले सोध्दैनौँ ।
अहिलेको समाज र पहिलेको समाजमा धेरै अन्तर आईसकेको छ । पहिलेको समाजले यो हाम्रो परम्परा हो त्यही भएर दशैँ मनाको हो भन्दा विश्वास गर्थ्यो भने अहिलेको समाजले कारण अर्थात् त्यसको इतिहास खोजिरहेको हुन्छ र तपाईले दिएको उत्तर व्यवहारिक लागेन भने उसले मान्दैन । उत्तरमा किन, के, कहाँ , कहिले र कसले भन्ने सबै प्रश्नको उत्तर नआएमा नयाँ पुस्तालाई चित्त बुझाउन सकिँदैन । यसकारण दशैँको बारेमा र हाम्रा सँस्कार र चाडपर्वहरुको बारेमा लेखिएका लेख रचनाहरु, पुस्तकहरु खोजी- खोजी पढ्ने बानी बसाल्नु होस् जसले तपाईलाई सधै उत्तर दिन सक्ने बनाओस् । स्मार्ट फोन चलाउन जान्दैमा, २/४ अक्षर लेख्न र पढ्न जान्दैमा विद्वान भईँदैन । कोही कोहीलाई भने यस कुरामा आफूले स्नातकोत्तर नै पास गरेको जस्तो भान हुँदो रहेछ । बिना अध्ययन र बिना अभ्यास पस्किँदा कहिलेकाही “अनभ्यासे विषं विद्या अजीर्णे भोजनं विषम्” भने जस्तै अमृत तुल्य वस्तु पनि विष बन्न सक्छ । आफूलाई ज्ञान नै नभएको विषयमा कृपया स्वयं ज्योतिषी वा अरुको लागि आफै पुरोहित नबनिदिनु होला यो मेरो अनुरोध । सक्नु हुन्छ भने आफ्नो गहिरो अध्ययन जुन विधामा छ त्यसैमा अगाडि बढ्नु होस् र सफल हुनुहोस् साथै आफ्नो सन्तानलाई राम्रो संस्कार सिकाउन चाहिँ नभुल्नुहोस् । तर आफूलाई ज्ञान नै नभएको विषयमा अरुलाई दर्शन न छाँट्नुहोस् ।
ज्योतिषका पाँच अंग, नौ ग्रह र अठ्ठाईस नक्षत्रका नाम सम्म नजान्ने व्यक्तिहरू पनि आफ्नो नामको अगाडि श्री ज्योतिषविज्ञ, ज्योतिष ज्ञातासम्म लेख्न पछि पर्दैनन् जसको फल स्वरूप आज यो दिव्य विज्ञान ओझेलमा परेको हो त्यसका केही दोषी हामीहरू पनि हौं । किनकि यस विषयलाई कमाई खाने भाँडाको रूपमा मात्र प्रयोग गर्नु पूर्व हामी गहन अध्ययन गर्ने हो भने यस्तो अवस्था आउँदैन । पढ्दै नपढी दुईचार वटा श्लोक रटेको भरमा मानव जीवन र सम्पूर्ण चराचरको मनगढन्ते फलादेश गर्न थाल्दछन् कोही व्यक्तिहरु, संयोगबस कसैको मिल्छ, कसैको मिल्दैन । मिल्नेहरुले ओहो फलानो ज्योतिषी त कति जानेको सबै कुरा मिलायो भन्दै हामी सबै जना उसैकहाँ पुग्दछौँ उसले कति पढेको छ वा कति बुझेको जानेको छ त्यसको विचार गर्दैनौँ । जसले गर्दा पढेर जानेका ज्योतिषीहरु पनि ओझेल परेको देखिन्छ ।
यी कुरामा न अल्झिई अब दशैँ कसरी र कहिले सुरु भएको थियो त ? भन्ने कुरालाई आधार मान्दै यसको निर्णयतर्फ लागौँ । तर निर्णय लिनु भन्दा अघि यो लेख पूरै पढेर मात्र लिनु होला ।
अब लागौँ ज्योतिषीय सामान्य जानकारी तर्फ –
ज्ञान र विज्ञानलाई अध्ययन गर्नको लागि ज्योतिषरूपी चक्षुको आवश्यकता छ । वैज्ञानिकहरूले आज कम्प्युटर, दुर्बिन र अनेक विश्वविद्यालयको ल्याब वा प्रयोगशालामा बसेर पूरा ब्रह्माण्डकै अध्ययन गर्दै आएका छन् भने हाम्रा ऋषिमुनिहरुले आफ्नो अनुभवको आधारमा त्यो ज्ञान बताउन सक्थे । नासाको लागि काम गर्ने वैज्ञानिकहरु आज ग्रह तारा नक्षत्रहरुको खोजिमा लागि परेका छन् जुन ज्ञान हजारौँ वर्ष अगाडि पूर्वीय दर्शन र ज्योतिषमा स्पस्ट छ ।
नेपालमै पनि यो ज्योतिष विषय दुई खण्डमा विभाजित छ – फलित र सिद्धान्त गरी पीएचडी सम्म पढ़ाई हुन्छ ।
पात्रो अर्थात् पन्चांग भनेको के हो ?
ज्योतिषको पाँच अंग मध्ये तिथि एक हो भने बाँकी बार, नक्षत्र, योग र करण हुन् । यी पाँच ( तिथि, बार, नक्षत्र, योग र करण ) लाई व्यवस्थित रुपमा गणना गरी बनाईएको वर्षभरिको क्यालेन्डरलाई पन्चांग ( पात्रो) भनिन्छ । यो दुई प्रकारको हुन्छ चन्द्र र सूर्य , तर यसलाई गते अर्थात् तारिख र बारसँग मिलाउनका लागि सूर्यसिद्धान्तलाई आधार मानिन्छ ।
हाम्रो नेपाल तथा दक्षिण एसियामा मनाउन सुरु गरिएका जति पनि चाडपर्वहरु छन् ती सबै तिथिको आधारमा मनाईन्छन् । जुन कुनै कुनै ग्रह नक्षत्रहरुसँग पनि जोडिएर आउँछन् । गते र बार जस्तो एउटै समयमा तिथिको सुरुआत हुँदैन । दिन सधै २४ घन्टाको मात्र हुन्छ भने तिथि घटबढ हुन्छ । सधै एकनास हुँदैन ।
तिथि भनेको के हो ?
चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ। चन्द्रमालाई पृथ्वीको परिक्रमा पूरा गर्न करिब एक महिनाको समय लाग्छ। यसै क्रममा कहिले सूर्य तथा पृथ्वीको सन्मुख दिशा त कहिले विपरीत दिशामा पर्ने भएकाले कहिले पूर्ण रूपमा देखिन्छ भने कहिले देखिदै देखिँदैन, कहिले आधा, कहिले सानो अथवा ठूलो आकारको देखिन्छ । यसरी चन्द्रमा कहिले दृश्य त कहिले अदृश्य हुने क्रियालाई चन्द्रमाको कला भनिन्छ । चन्द्रमाको कलाको आधारमा चन्द्रमा पूरा देखिएको दिनलाई हामी पूर्णीमा(पूर्णी) र अदृश्य भएको दिनलाई हामी अमावश्या(औँशी)भन्छौँ । यसै गरी औँशीदेखि पूर्णिमासम्म पुग्न चन्द्रमाले १५ दिन लगाउँछ । पूर्णिमादेखि औँशीसम्म पुग्न अर्को १५ लाग्ने हुँदा यसलाई कृष्ण पक्ष र शुक्लप़क्षका नामले अलग अलग नाम दिईएको छ जसलाई तिथि भनिन्छ । तिथिहरूका नाम यस प्रकार छन्:
अब लागौँ तिथि र दशैँको संयोजन कसरी भएको छ ?भन्नेतर्फ – यिनै तिथिहरु शुक्लपक्ष र कृष्णपक्षका नामले प्रत्येक दिन हामी माझ झुल्कन्छन् । वैशाख, जेष्ठ, असार, साउन, भदौ हुँदै आश्विन शुक्लपक्षको प्रतिपदादेखि दशैँको सुरुआत हुन्छ यसलाई हामी नवरात्र भन्छौँ । नौ रात्रि अर्थात् नौवटी देवीको छुट्टाछुट्टै पूजा आराधना गरिन्छ । जुन कुरा देवीभागवत महापुराणमा उल्लेख्यरुपमा वर्णन गरिएको पाईन्छ ।
आश्विन शुक्ल प्रतिपदामा घटस्थापन गरी जमरा राखी नवमीसम्म नवरात्र विधिले प्रत्येक दिन फरक फरक देवीहरूको पूजा हुन्छ । प्रतिपदादेखि क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायिनी, कालरात्री, महागौरी, सिद्धिदात्री गरी नवदुर्गाको पूजा गर्दै सप्तशती (चण्डी) पाठ गरी नव दुर्गा र तृशक्ती महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजाआजा र आराधाना गरिन्छ । विजयादशमीको दिन भगवतिले दानवी शक्ति महिषासुरमाथि र महानवमीको दिन रामले रावणमाथि विजय हासिल गरेको उपलक्ष्य र खुसीयालीमा नवदुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरुप खड्गजात्रा गरी सेतो/ रातो टीका र जमरा लगाउने चलन छ । फलस्वरूप अझै पनि गुल्मी तथा अर्घाखाँची जस्ता जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरुमा फूलपाती सेलाउँदा खड्ग नचाउँदै बाजागाजाका साथ सराएँ निकाली दशैँलाई रमाईलो मेलाका साथमा विदा गरिन्छ ।
आश्विन (असोज) महिनाको शुक्ल पक्षको दशमी तिथिको दिन यस पर्वको प्रमुख दिन हो । भगवान् रामले यसै दिन रावणको वध गरेका थिए । यसलाई असत्य माथि सत्यको विजयको रूपमा लिईन्छ । यसकारण, यस दशमीलाई विजया दशमी भनिएको हो । वरपरका मानिसलाई समेत सजिलो होस् भन्ने हेतुले यो कार्य पूर्णिमासम्म गरिन्छ ।
किन २५ तारिख साईत भन्ने सम्बन्धमा ?
अमेरिकाको पूर्वी समयअनुसार अमेरिकाको लागि बनाईएका पात्राहरुमा दशमी तिथि आश्विन शुक्ल दशमी तिथि २५ तारिख बिहान १ :३२ बजेदेखि २६ तारिख बिहान १ बजेर ५१ मिनटसम्म्म मात्र भएकोले आईतवार टीकाको साहित निस्किएको हो । सधैं यस्तो हुँदैन । यहाँ यदि दिउसोको समयमा तिथि सुरु हुँदो हो त एउटै वारमा पर्न आउँछ । त्यसकारण तिहारको साईत एउटै बारमा पर्न गएको छ । नेपालमा
आफ्ना नाता, कुटुम्ब, ठुला बडा र मान्यजनबाट टीका तथा जमरा लगाउने र आशीर्वाद प्राप्त गर्ने नयाँ नयाँ कपडाहरू लगाउने, आफ्नो क्षमताअनुसार मिठो खाना खाने-ख्वाउने, घर आँगन, बाटोघाटो, गाँउ बस्ती सफासुग्घर राख्ने जस्ता काम यस चाडमा विशेष उत्साहका साथ गरिन्छ ।
प्राचीन कालदेखि नै मनाउँदै आईरहेको यो पर्वमा नेपाल आर्मी तथा नेपाल प्रहरी गण भित्र पनि दशैँमा सम्पूर्ण सिपाहीको रगतमा वीरता प्रकट होस् भनी देवीको प्रार्थना गरिन्छ । लडाईका लागि जानुपर्यो भने पनि देवीदेवताको आरधना गरी प्रस्थान गर्ने परम्परा छ यो एक हिसाबले राम्रो पक्ष पनि हो किनकि यसबाट उर्जा प्राप्त हुन्छ । अन्नमा सबैभन्दा शुद्ध मानिएको जौँलाई भिजाई घटस्थापनाको दिन छरेर दशमीको दिन टीका र जमरा देवीलाई चढ़ाई ( मौलामा पनि चढाउने चलन छ) अनिमात्र ठूलाले सानालाई टीका र जमरा लगाई दिएर यी मन्त्रद्वारा आशीर्वाद दिईन्छ । जौँ तथा जमरालाई आयुर्वेदिक ओषधीका रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ ।
दशैंको उपलक्षमा शुभकामना आदान प्रदान गर्नुका साथै बडादशैँको दिन (दशमी) देखि सबैले आफूभन्दा सानालाई टिका लगाइदिंदा निम्न मन्त्रहरु पढ्ने गरिन्छ । यि मन्त्र पनि पुरुषलाइ छुट्टै र महिलालाइ छुट्टै हुन्छ:
Hindu Calendar and panchanga २०२० for USA and CANADA only.
भौगोलिक हिसाबले हामी नेपालभन्दा पश्चिममा छौँ र समयको हिसाबले हामी ११/ १२ घन्टा पछाडि छौँ तर तिथिको हिसाबले हामी संगै छौ । २०२० अक्टोबर १७ नेपालको समयअनुसार दशमी तिथि ७ दिउसो ३ बजेर ७ मिनेटमा सुरु भई त्यहाँको समयानुसार भोलिपल्ट बेलुका ४ बजेर १९ मिनटसम्म रही श्रवण नक्षत्रले युक्त भएकोले नेपालमा 26 तारिख दशैँ मनाउने निर्णय भयो तर अमेरिकामा भने सोही समयमा मनाउनका लागि रातको समय भयो । 25 तारिखको राति (विहान) 1 बजेर 32 मिनेटदेखि सुरु भई 26 तारिखको विहान 1 बजेर 51 मिनेटसम्म मात्र रहने भएकोले सजिलैसँग २५ तारिख पर्न गएको हो । समय पछाडि छ भन्दैमा तिथिको सुरुआत पनि पछाडि चाहिँ हुँदैन । त्यस्तै घटस्थापना किन एउटै दिनमा पर्यो त ? भन्ने सम्बन्धमा नेपालको समयअनुसार 16 तारिख अमेरिकाको पूर्वी भूभागमा दिउसो4बजेर 8 मिनेटमा सुरु भई 17 तारिख दिउसो 1 बजेर 44 मिनेटसम्म रहेकोले १७ मै घटस्थापना पर्न गएको हो । यदि सूर्योदय पछाडि तिथि नरहेको भए घटस्थापना पनि अक्टोबर १६ मै मनाउन पर्ने स्थिति हुन्थ्यो ।
यस्तै यस्तै परम्पराहरुका कारण आज हाम्रो हिन्दु सँस्कार कठघरामा पर्न बाध्य भएको छ । यदि हामीले हाम्रा सन्ततिलाई व्यवहारिक सँस्कार सिकायौँ भने भोलिको हिन्दु सँस्कार विश्वभर नै नचम्कला भन्न सकिँदैन । किनकि अहिलेसम्म हिन्दु सँस्कारजस्तो पुरानो र वैज्ञानिक सँस्कार कुनै पनि अन्य धर्ममा पाईँदैन । हाम्रो सँस्कारलाई माझेर परिमार्जन गर्दै लग्न सकियो भने मात्र संसारले मान्न सक्छ, अन्यथा हामी नै अर्थात् हाम्रा सन्ततिहरु नै उनीहरुको सँस्कारमा गाभिन बेर लाग्दैन । डिसेम्बर २५ तारिख अचल दिनमा क्रिसमस मनाएजस्तो होईन हाम्रो दशैँ । सधै फरक दिनमा पर्छ, कहिलेकाहीँ नेपाल र यहाँ एउटै बारमा पनि पर्न सक्छ । यसका लागि यो लिंकमा गई हेर्नुहोला – Nepali panchanga U.S.A. and Canada
नेपालको लागि भनेर निकालिएका पात्राहरुको अमेरिका तथा क्यानडामा हुबहु प्रयोग गर्नु हुँदैन र तिथिअनुसार मनाईने हाम्रा सबैजसो चाडपर्वहरु नेपालसँग एकैदिन वा एकदिन पछि पर्नसक्छन् । त्यसकारण अमेरिकाकै समयअनुसार यहीँकै तिथिमितिमा गर्नु, गराउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै ज्योतिषी गुरुहरुको मतैक्यता भएको छ ।
नोट: दशैँ कुन दिन मनाउने भन्ने कुरा अब यति कुरा बुझिसकेपछि हजुर स्वयं आफै निर्णय गर्न सक्नु हुनेछ भन्ने यो ज्योतिषी लेखकको बुझाई छ । यदि तपाई अमेरिका तथा क्यानडामा हुनुहुन्छ भने आईतबार नै साईत गरेको उत्तम, यदि तपाई नेपालमा हुनुहुन्छ भने सोमबार नै साईत गरेको उत्तम । तर आफ्नो अनुकुलमा परिवारको अनुकुलमा मनाउन चाहनु हुन्छ भने ज्योतिषको आवश्यकता नै पर्दैन । जुन सुकै समय तपाईको लागि उपयुक्त हुनेछ । यसकारण यस्ता कुरामा अनावश्यक टीका टिप्पणी बन्द गरौँ । यी साईत शास्त्रीय तथा ज्योतिषीय गणनालाई आधार मानी बनाईएको हो । जो जसले साईतअनुसारकै समयमा मनाउन चाहनु हुन्छ उहाँहरुलाई यो पूर्णत: लागू हुन्छ । जो आफ्नो समयअनुकुल मात्र गर्न चाहनुहुन्छ वा नेपालको समयलाई आधार मानी गर्न चाहनु हुन्छ उहाँहरुको लागि जे गर्नु हुन्छ आफै निर्णय लिनुहोस् । किनकि नेपालको समयमा गर्न खोज्दा यहाँ रातको समय पर्छ, भोलिपल्ट गर्न खोज्दा तिथि सकिएको हुन्छ । त्यसकारण यस्ता कुरामा कुनै विवाद वा टीका टिप्पणी गर्नु औचित्य देखिँदैन । अहिले अब यो कलियुगमा सबै कुरा म नै आफै जान्दछु भन्नु हुन्छ भने पनि केही छैन तपाईले आफूले चाहेको गर्न पाउनु हुन्छ तर चलिआएको सनातन धर्म र सँस्कारप्रतिको शास्त्रीय/ ज्योतिषीय नियम गुमाउनु भनेको सबै कुरा छोडेर अरु सम्प्रदाय जसो गर्छन् उसै गर्नु हो । यसकारण यदि तपाईको घरमा मान्यजन तथा गुरु, पुरोहित हुनुहुन्न भने पनि आफ्नो देवी देवतालाई साक्षी राख्नुहोस् साईतमै टीका जमरा अर्पण गर्नुहोस् र टीका प्रसाद लगाउनुहोस् । एकपटक साईत गरेपछि तपाईले जुनसुकै समयमा लगाउन सक्नुहुनेछ, भर्चुअलमाध्यमबाट पनि आशीर्वाद लिन सक्नुहुन्छ अहिले यो कोरोनाको बेलामा । यस विषयमा विस्तृत रुपमा बुझ्नका लागि यो लिंक खोल्नुहोला https://www.facebook.com/100000425083282/posts/3731496756874457/?extid=0&d=n। जय होस् । धन्यवाद !
हामी चाहिँ यसरी मनाउँदै छौँ यो दशैँ । हेर्नुहोस् click
अक्टोबर २५ आईतबार दशमीको दिन देवी विसर्जन तथा जमरा बितरण बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म हुनेछ । आफ्नो अनुकूलमा टीका लगाउन चाहनुहुनेहरुले अक्टोबर ३१ तारिखसम्म लगाउन सक्नु हुनेछ ।
यहीँ २५ तारिखदेखि ३१ तारिख सम्ममा यस वर्ष कोभिड -१९ को कारण भर्चुअल माध्यमबाट टीका तथा आशीर्वाद थाप्न सक्नुहुनेछ । भक्तजन महानुभावहरुले सम्पर्क गरी जुनसुकै समयमा पनि फेसटाईम गर्न सक्नु हुनेछ । 703-870-6480 or khannalguru@gmail.com
त्यसैगरी मारुतीनन्दन पन्चांगले पनि अमेरिकाको लागि भनी दशैँको साईत प्रकाशित गरेको छ । हामी जहाँ बस्छौँ त्यहीँको अक्षांश र देशान्तरको आधारमा तिथिको गणना गरी यस्ता विशेष खालका चाडपर्वहरु शुभ साईतमा मान्नु पर्ने भएकोले यसरी निकाल्न थालिएको अन्तर्राष्ट्रिय पन्चांग निर्णायक समितिका अध्यक्ष डा. माधव भट्टराईले बताउनु भएको छ । हेर्नुहोस् प्रेसविज्ञप्तिसहितको साईत । यस बारेमा अरु पनि थप जानकारीका लागि दृक पन्चांगलाई अनुशरण गर्न सक्नु हुनेछ वा info@hinduculturecenter.com मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ । यस बारेमा कुनै जिज्ञासा भएमा कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नु हुनेछ । धन्यवाद ।